Volatility imwe nzira yekudyara | Ehupfumi Zvemari
Parizvino mashoma emari midziyo akafanana neyepakutanga uye anobatsira sekusagadzikana. Kunyanya sezvo maUS equities aive neiyo kuwira kukuru munhoroondo yayo, nekusiya 5%. Yakagadzirwa mune yambiro yakazara kune vafambi vezvikepe nezvekuti kupi kudyara mumusika wemasheya kunogona kuenda kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti nekusagadzikana, kuchengetedza kunogona kuitwa kunobatsira kunyangwe muzviitiko zvisina kunaka zve mari yemari. Chero zvazvingaitika, iyi imwe nzira nyowani inovhura iwe kuti uwane mikana mitsva yebhizinesi. Vhura kune ese mamiriro muhomwe.
Shanduko dzinogona kuitika kubva parizvino dzinogona kukonzera kuti misika inyatsotanga kufamba uye kusagadzikana kuenda kudzokera kumisika. Kuti iwe utore iyi inonakidza maitiro, iwe unenge usisina imwe sarudzo kunze kwekumira iwe mune ino yekuda kuziva angangoita mari yemari. Hazvishamisi kuti pane mari yakawanda yaunogona kuwana kubva ikozvino nezvigaro zvako. Asi mukutsinhana nekutora dzimwe njodzi mune yega yega mashandiro eaya maitiro. Neichi chikonzero iwe unofanirwa kuve wakangwarira kupfuura kuburikidza nemamwe mabasa echinyakare.
Volatility inowanzo kuve inogadzirwa kune rimwe divi reAtlantic uye nechikonzero chakakosha kuti iwe unzwisise zvakakwana. Izvo hazvisi zvimwe kunze kwekuti iyo index Dow Jones yakwira paavhareji 30% kupfuura iyo Ibex 35 uye nekudaro inobatsira zvakanyanya kukudziridza mafambiro echisimba akadaro mumisika yemari. Nekuti pane imwe nguva nenguva maitiro ayo anogona kuchinja zvakanyanya. Hazvishamisi kuti zvakaitika munguva yekutanga kwaFebruary zvaive chiratidzo chakajeka cheizvo zvinogona kuitika gore rino. Kusvika padanho rekuti iwe unofanirwa kuve wakasvinura nezve zvese zvinoitika mune dzepasi rose masheya indices.
1 Volatility: zvinoenderana nemitengo
2 Vari iwo chaiwo mafambiro?
3 Chengetedza mari mukutya index
4 Unganidzo mumari yekudyara
5 Kubatsira kwenzvimbo dzekusagadzikana
Volatility: zvinoenderana nemitengo
Iwe unofanirwa kuziva kuti misika yacho yanga iine "doping" hombe kwazvo nekuda kwekutengwa kwezvisungo ne Federal Reserve uye European Central Bank. Ichi chinhu hachigare nekusingaperi uye chinogona kusiyana chero nguva uye nekudaro unofanirwa kuve wakagadzirira. Nekuti mune ino kesi, hapana mubvunzo kuti kusagadzikana kuchadzokera kumisika yemari. Kunyangwe iine hunhu hwakakosha, sevamwe vanoongorora zvemari vari kunyevera. Iko kune mari yakawanda iwe yaunogona kurasikirwa nayo mumusika wemasheya kana uine nzvimbo dzakashama.
Mupfungwa iyi, sarudzo pa mareti emari zvichave zvakakosha kuti uone kuti shanduko yemari dzepasi rose dzichazovei pakupedzisira. Iko kutya kwemisika yemari ndeyekuti izvi zvinowedzera muUnited States zvichaitwa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura vanofunga vatengesi. Hazvishamise kuti ichi ndicho chimwe chezvikonzero chaizvo nei misika yemasheya emunhu wese yadonha mumwedzi waKukadzi. Parizvino kwave kutyisidzira kwakakosha zvekuti zvirokwazvo kwave kutya chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Asi chausingazive ndechekuti kubva ikozvino uchakwanisa kubatsirwa nekusagadzikana mumisika yemari.
Vari iwo chaiwo mafambiro?
Iko kuderera kwemari kwakatungidza mwenje mutsvuku wevashandisi vestoko. Asi ino ndiyo nguva yekuratidza kana ichi chiri chimwe chinhu chakanangana kana kana zvichipesana chasvika kuzogara, sekutaura kwevamwe vanoongorora zvemari. Nekuti iyo vertigo inopihwa nemisika yeAmerica Pane ma maximums, mamiriro acho anogona kuchinja zvakanyanya chero nguva. Ipapo chichava chiitiko chekudyara mukusagadzikana. Kunyangwe pakutanga iwe usiri kunyatso kujekesa kwaunofanirwa kuenda kunotora mukana weakakosha mafambiro. Ehe, iwe unofanirwa kuve unokurudzirwa kuti uite irwu rudzi rweatypical mashandiro mumisika yemari.
Chero zvazvingaitika, gamuchirai zvakare kusagadzikana, nekuti izvi ndizvo zvinowanzoitika mumusika wemasheya. Haisi chimwe chinhu chinoshamisa, kure nazvo, asi chikamu chechisimba chemari. Uye sekare sehomwe yacho pachayo. Chinhu chega icho usati wawana zvigadzirwa zvakafanira kuti zvishande pamwe neaya mafambiro ari kuvezve mufashoni pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Nechinangwa chekuita mari muzviitiko zvisingafadze zvemari dzekunze. Pakupera kwezuva, icho chinhu chausingakwanise kutonga nenzira ipi neipi kwemwedzi mishoma inotevera.
Chengetedza mari mukutya index
Nzira yakatwasuka yekudyara mari dzako mukusagadzikana ndeyekudaidzwa kunonzi kutya index. Nekuti iyi ndiyo nzira inozivikanwa kunzi VIX. Iyo indekisi yemasheya inoteedzera iyo S & P, asi pasi pemaitiro anopesana. Ndokunge, yakaderera misika yemasheya, iko kukura kuri kusangana neichi chiratidzo cheUnited States stock market. Hazvishamise kuti, mukati megore rino rekuputsika kwemusika wemusika muDow Jones, iyo VIX inokosheswa neinopfuura 50% Sezvauri kuona, pane mari yakawanda yaunogona kuwana neiyi maitiro mumisika yemari.
Iyo index yekutya inobatsira kwazvo apo bhegi rinodzika. Asi chero zvakadaro iwe unofanirwa kuenda nenguva nekuti unogona kusiya maeuro mazhinji munzira. Kupfuura iwe zvaunofunga kubva pakutanga. Ndiyo njodzi huru yekuita kwako, sekuyambira kunoita vanoongorora zvemari. Asi iwe unofanirwa kufamba zvakanaka kwazvo pakati pezvinzvimbo zvavo kubva ikozvino zvichienda mberi kana iwe usiri kuda kutora kushamisika kwakashata kunokanganisa iyo bhalansi reakaundi yako yekutarisa. Ichi chinhu chaunofanira kunge uchikoshesa nekukosha kwakanyanya.
Unganidzo mumari yekudyara
Chimwe chezvigadzirwa zvemari zvinonyatsoratidza maitiro aya mari yekudyara. Vamwe vavo vanoisa mari mune ino yakasarudzika ficha. Ichokwadi kuti parizvino hapana zvakawanda, asi zviripo zvakakwana sangana nechikumbiro ichi iyo iwe yaunofunga mukudyara. Zvakanaka, nemari idzi unogona kubatsirwa nekusagadzikana kwemisika yemari. Iyo yakakura kudonha muzvikwereti, inowedzera mari ichaenda kuaccount yako yekutarisa. Aya ndiwo mashandisiro anoita aya mahomwe ekudyara mari.
Iyi kirasi yezvigadzirwa haina kuitirwa kwenguva yakareba kwazvo yekugara. Kana zvisiri zvakapesana, kwenguva shoma kana shoma uye izvo zvakanyudzwa mukufamba uku. Nekuti zvirokwazvo ivo vanokwanisa kukupa unopfuura kusada. Muchidimbu, zvakagadzirirwa nguva dzakatarwa dzinoda mari iyi. Chero nzira, unogona siyana navo neimwe mari yakadzikama zvikuru. Zvekuti nenzira iyi, unogona kusiyanisa mari nenzira yakachengeteka. Kusvika padanho rekutora njodzi shoma uye ndizvo zvinogara zvichionekwa.
Kubatsira kwenzvimbo dzekusagadzikana
Saka kuti iwe unyatso kujekesa nezve kusagadzikana chii, zvichave zvakakosha kuti iwe uongorore kuti ndeapi mabhenefiti ayo kutora chinzvimbo chinokupa iwe. Zvimwe zvacho zvinonzwisisika kubva kune ese maonero maonero, asi mamwe anokwezva kutarisisa kwako kubva kune ako maonero seadiki nepakati investor. Sezvazviri pazviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi.
Iyo ndeyechokwadi inoverengeka uye hunyanzvi hwekudyara iyo inobvumidza chizvarwa che mukuru anodzoka pane zvakajairika equity-based zvigadzirwa.
Iwe haufanire kunongedza yakawanda kune rudzi urwu rwekudyara. Kana zvisiri, pane kudaro, chikamu chidiki chemuzinda chinokwana kugutsa ichi chakakosha kudiwa.
Unogona riwedzere pamwe nedzimwe mari dzimwe nzira. Nechinangwa chekutanga chekuchengetedza zvakachengetedzeka mari yakachengetedzwa. Zvekuti iwe ugone kudzikisa kurasikirwa mune dzakaipisisa nguva yemusika wemusika.
Kune akawanda mari yekudyara inopa ino yakakosha ficha. Saka kuti iwe ugone kusarudza iwo akanyanya kunaka ivo vanoumba kune yako mbiri sediki uye epakati inverses. Kubva pane inoshanda manejimendi nzira kwavari.
Iwe unogona kugadzirisa zvinzvimbo chero nguva sezvo ivo vasingape hapana mhando yekukura izvo zvinogona kusvina mari dzako. Asi, pane kudaro, inofamba nerusununguko rukuru rwekusarudza.
Naizvozvo, kana iwe ukafunga kuti mabhenefiti aya anopfuura kukuvara, ichave nguva yekuti iwe usarudze iyi imwe mari yekudyara. Nekuti inogona kubatsira zvakanyanya kupfuura zvimwe zvese. Chero bedzi iwe uchiziva kuyera nzira dzekupinda nekubuda. Hazvishamisi kuti ndeimwe yemakiyi akakosha ku gonesa iyi mhando yekushanda. Kusiyana nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya izvo zvinoda musiyano wakasiyana.
Chero zvazvingaitika, iwe unenge watove nekujekesa zvishoma pane izvo mari yekudyara mukusagadzikana inosanganisira kubva ikozvino Kunyangwe izvozvi danho rekuvhura nzvimbo rinongoenderana nekutaridza kwawasvika panguva ino. Nekuti ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda, asi chero bedzi iwe uchifungidzira njodzi idzo mabasa ako anosanganisira. Nekuti iri chimiro chekudyara chakabuda mumakore apfuura. Uye ichi chinhu chaunofanira kufunga nezvacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Volatility imwe nzira yekudyara